Maurizio Sarri oo sharaxay sababtii uu shalay isagoo careysan kaga baxay tababarka Chelsea – Gool FM
(Yurub) 29 Maajo 2019. Macalinka kooxda Chelsea ee Maurizio Sarri ayaa shaaca ka qaaday sababta dhabta ah ee ka dambeysay inuu isagoo careysan shalay ka baxay tababarka Blues, kahor finalka Europa League.
Subaxnimadii shalay ee Talaadada ahayd Chelsea ayaa tababar furan ku qaadaneysay garoonka Olympic Stadium ee magaalada Baku iyadoo xubno ka mid ah warbaahinta ay xaadir ahaayeen.
Dhamaadkii tababarka Maurizio Sarri ayaa la arkayay in isagoo xanaaqsan uu ka baxayay garoonka, wuxuuna marka uu sii baxay sii tuuray koofiyadiisa, kahor inta uusan sii laadin.
Mudooyinkii ugu dambeeyay tababaraha reer Talyaani ee Maurizio Sarri mustaqbalkiisa kooxda Chelsea ma fadhinin oo shaki ayaa la galinayay shaqadiisa, kooxda ayaana lala xiriirinayay inay badal kaga dhigto Frank Lampard xagaagan.
Markii hore waxaa la soo jeediyay in Maurizio Sarri uu ka xanaaqay dagaal dhex maray xiddigaha David Luiz iyo Gonzalo Higuain, inkastoo markii dambe uu hoos u dhigay arintaan tababaraha reer Talyaani.
“Waxaan filayaa inaadan awoodin inaad fahanto wixii shalay” ayuu Maurizio Sarri u sheegay BT Sport.
“Hadii ciyaartoydeydu ay yihiin kuwo qalafsan marka ay tababarka qaadanayaan waan faraxsanahay, ma niyadjabsani”.
“Aad ayaan uga niyadjabsanaa maxaayeelay waxaan isku dayay oo isku dayay hadane inaan xaliyo arimo ku saabsan kubaddaha lasoo qaado, laakiin 15-kii daqiiqo ee ugu dambeeyay tababarka kaamirooyinka ayaa meesha joogay”.
“Aaad ayaan u niyadjabsaneyn, maxaayeelay xaaladaas meesha ka dhacday, mana ahayn ciyaartoyda waxaan ka carooday”.
Rivaldo oo si cad u sheegay kooxda uu u baahan yahay Neymar si uu ugu guuleysto Champions League